LANCET (GUBANAYA BAADIYAHA): GURYAHA FAA'IIDO LEH IYO CODSIGA GEEDKA - SOOSAARKA DALAGGA
White Assen waa warshad leh ubaxyo qurxoon oo qurux badan oo dhab ahaantii soo jiidanaya muuqaalkeeda iyo caraf udgoon. Si kastaba ha ahaatee, dad yar ayaa og in dhirtaas ay halis u tahay caafimaadka dadka.
Haddii aad uriso, ama ka sii xumaato, taabo, waxaad heli kartaa gubasho khatar ah oo culus. Laakiin, sida aad ogtahay, kharashka oo dhan wuxuu leeyahay laba dhinac, xayndaabkuna maaha mid ka reeban.
Waxaa si guul leh loo isticmaalaa daawada dhaqanka si looga takhaluso xanuunka kala duwan. Aan isku dayno inaan ku baraarno warshad khilaafkan ah oo aan barano sida loo isticmaalo sifooyinka faa'iidada leh.
Geedka gubanaya wuxuu ka kooban yahay qiyaastii 0.5% saliidaha lagama maarmaanka ah, iyo sidoo kale anethole iyo methylchavicol. Inta badan nafaqooyinka laga helo xididada iyo dhirta geedka.
Xididku wuxuu ka kooban yahay qanjidhada iyo dufanka cad, iyo astaamaha ay hodan yihiin saponins, alkaloids, anthocyanins, dictamnactones, flavone glycosides.
Ma taqaanaa? Waxaa mahad leh saliidaha lagama maarmaanka ah ee loo yaqaan 'yasenets' oo loo yaqaan 'non-burning or plants-self-firing. Xaqiiqdu waxay tahay in haddii aad soo qaadatid laydh cad, waxaa dabka ka soo baxaya shucaac. Isla mar ahaantaana dhirta lafteedu waxay ahaan doontaa mid nabdoon oo dhawaaq ah.
Iyada oo ay sabab u tahay hannaanka hodanka ah ee maadooyinka iyo maaddooyinka waxtarka leh, miisaanka cad ee leh guryaha soo socda:
wuxuu dejiyaa nidaamka dareemayaasha;
waxay isku dhejisaa marinnada dhiigga;
loo isticmaalo heerkulka sare;
waxay kordhisaa hawsha qarsoon ee caloosha;
waxay xukuntay wareegga dumarka;
wax ku ool ah oo ka dhan ah maadiga;
waxay ka caawisaa in la yareeyo casiraad;
loo isticmaalo qurxiyo.
Baro waxyaabo badan oo ku saabsan sifooyinka wanaagsan ee dhirta noocan oo kale ah sida mountaineer, avian, skumapia, Leuzea, coltsfoot, catnip, horsetail, ambrosia, dhogrose, luzubka Lyubka, gaajo qadhaadh
Lancet waa caddaan, ama Caucasian, oo loo isticmaalo daaweynta cudurrada dabaysha, pyelitis, dhagxaanta kalyaha, shubanka, cudurrada haweenka (xanuunka caadada), qandho sare, xaalad niyadjabsan iyo suuxdin, duumo, iyo cagaarshow.
Daawada dadweynaha, gumaanka iyo abuurka xayawaanka ayaa loo isticmaalaa sida durayo iyo cidhiidhiga marinnada dhiigga. Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dermatosis, xummad casaan, cambaar.
Maraq laga bilaabo xididka Yasenets waxaa loo isticmaalaa dibadda si loo xoojiyo timo-xajin, oo leh xididada barafka iyo cagta cagta. Faleebo abuur ah waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin qurux badan. Geedka gubanaya waa qayb ka mid ah hababka lagu daaweynayo daal, asthenia iyo hurdo la'aan.
Ma taqaanaa? Daawiyayaashii qadiimiga ahaa waxay riixeen caleemaha xayawaanka waxayna sameeyeen fara badan. Waxay ku dhejiyeen caloosha haweenka si ay uga takhalusaan dhibaatooyinka uurka. Iyo qiiqa ka socda dhirta ayaa loo isticmaalay in lagu gaaro gobolka iskuulka.
Faleebo abuur ah (lagu taliyey shuban):
Wixii galaas oo biyo ah, qaado 5 g oo ah miraha, karkari isku dar ah 5 daqiiqo. Ku adkee saacad iyo cadaadis. Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo 1-2 qaado. qaaddo saddex jeer maalintii, saacad kadib cuntada.
Faleebo loogu talagalay daaweyn la'aanta:
Qaybo yar oo miraha ah ku shub 0.5 litir oo vodka ah oo ka baxsan laba toddobaad. Cab hal qaado oo saddex jeer maalintii.
Tincture ee xididka (leh hypertension):
Shub 8 g oo ah xididdada dhulka qallalan leh vodka (250 ml). Iska ilaali laba toddobaad gudahood mugdiga, ha ilaawin inaad mararka qaarkood ruxdo. Ka dib markaa, tuujin iyo cadaadis. Cab saddex jeer maalintii, 40-50 dhibcood 30 daqiiqo. kahor cunista cuntada.
Haddii ay jirto xaalad aan loo baahnayn, goryaan goji, caleemaha, strawberries, euphorbia, rosemary, goldenrod, stonecrop purple ayaa loo isticmaalaa.
Maraq laga soocaa xididdada Yasenets (macaanka guud):
Qaado hal shaaha oo ah xididdada la qalajiyey ee Yasets iyo ku shub 0.5 litir oo biyo ah karkaraya. Ku heyso qubeyska biyaha 30 daqiiqo. Ka dibna qabow iyo cadaadi. Saddex meelood oo saddex koob oo saddex daqiiqo ah maalin walba cabso soddon daqiiqo cuntada ka hor. Waxa kale oo loo isticmaalaa dibadda si loogu daaweeyo cambaarta iyo xummadda nettle.
Maraq daaweynta cystitiska iyo cagaarshowga:
Karkari 6 g of jilif ah ee jasiiradaha xididdada leh Honeysuckle wada leh 3 g of licorice. Isticmaal 2 p. maalin kasta, 10 g oo ah maraq.
Maraq laga bilaabo abuurka (daaweynta amenorrhea, hysteria, waxaa loo isticmaalaa sidii antiseptic):
Si aad galaas biyo ah karkariyo qaado nus dhan shaaha oo ah miraha, karkariyo 5-6 daqiiqo. isla markaana u istaag saddex saacadood. Maraq jeermis ah oo cabitaan ah cab cabitaan saddex jeer maalintii kahor cuntada.
Ka takhalusi canbaarayntu waxay ka caawinaysaa iskadeyntan: 3 dhibcood oo casiir ah oo caleemo ah iyo ubaxyada uumiyaalka ah waxay u baahan yihiin in lagu daro 2 dhibcood oo casiir ah oo marin-biyood ah. Ku dhaji carrabka, ku hay dhawr daqiiqadood oo tufid.
Ku celceli maalin kasta marba laba-saacadood inta u dhaxeysa qiyaasaha 10 maalmood. Casiirka ubaxa loo isticmaalo sida boomaatada daaweynta kansarka maqaarka. Sidoo kale, casiir ka soo afkoda iyo caleemaha geedka waa daaweyn wax ku ool ah ee burooyinka.
Baalashka cagta ee kubadda cagta:
Isku qaso qayb ka mid ah xididdada qoyan ee qalalan oo leh labaatan qaybood oo ka mid ah walxaha. Isticmaal maalin kasta illaa inta ay calaamadaha maqan yihiin Ku kaydi qaboojiyaha.
Saliid siinta daaweynta dermatosis:
Isku qas shan qaybood oo ah rooti budada ah oo leh shidaal jelly. Codso laba jeer maalintii. Ku kaydi meel gudcur ah, oo doorbideysa weel dhalada ah.
Shaaha ka soo jeeda qaybta above ee geedka:
Wixii shaaha soo daa galaas biyo karkaraya 1 tsp. qaaddo geed qallalan qallalan, ha u diyaargarow 30 daqiiqo kadibna qabow. Dhamaan shaaha oo dhan maalinta oo dhan. Shaahkan waxaa lagu talinayaa in lagu isticmaalo heerkulka jidhka sare, dhagxaan kellida, cudurrada dumarka iyo laabotooyinka.
Shaaha laga bilaabo xididdada geedka:
6 g oo xididdada dhulka ku shub 200 ml oo biyo ah. Karkari 5 daqiiqo, ku adkee. Cab maalinta oo dhan. Waxaa loo isticmaalaa xaaladaha niyadjabsan.
Tan iyo geedkii gubanaya waa warshad sun ah, waa wax aan suurtagal ahayn in lagu soo ururiyo miraha iyadoon loo isticmaalin gacmo gashi. Sababtaas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad taxadar u yeelato qadarka alaabta ceeriin ee la isticmaalo oo aan ka badnayn qiyaasta lagu taliyey.
Waa muhiim! Waa mamnuuc inaad ku isticmaasho yasinimada haweenka ee booska, sababtoo ah waxay u horseedi kartaa dhicin. Warshad haleeshay iyo xilliga naas-nuujinta.
Waxaa intaa dheer, khilaafka waa:
dhibaatooyinka habka neefsiga;
cudurada habka kaadida;
dhaawaca maqaarka oo qoto dheer;
xanuunada nidaamka dheef-shiidka;
carruurta ka yar 12 jir;
Dhirta daawada ee Billet
Duurjoogta, baadiyaha gubanaya meelo badan ayaa ku baxa: xayndaabka kaynta, cawska iyo cowska. Sidaa darteed, cawska goosashada ma noqon doonto mid adag.
Yasenets cawska waa la goostay inta lagu guda jiro ubax, iyo xididdada - xilliga dayrta ka dib miraha bislaadaan. Beerta qaar ka mid ah waxay door bidaan in ay dhakhtarkan dhirta beerahooda ku yaalaan.
Ashen, ama gubanaya baadiyaha - dhirta waa wax aan qabyo ahayn, iyada beerashada uma baahna xirfado gaar ah ee beerta. Markaad uruurinaysid caws, waxaad u baahan tahay dhar si buuxda u daboolan jirka oo idil, iyo gacmo gashi si aad uga fogaato dhaawaca maqaarka.
Waa muhiim! Haddii uu jiro xiriir la leh caws, maqaarka waa in lagu dhaqaa biyo socda ilaa 30 daqiiqadood.
Ka dib goosashada, cawska waa in la qalajiyaa meel ay jirto meelo badan oo hawo nadiif ah iyo halka qorraxda qorraxdu aanay ku dhicin. Waxa kale oo lagu qalajin karaa qalajiyaha, heerkulku waa inuusan ka badnaan 35 darajo.
Cawska la qalajiyey ee ah dhalashada ayaa lagu kaydiyaa qolka oo leh qoyaanka ugu yar ee dhalooyinka daboolka si fiican u xiran. Ku kaydi hal sano. Geedka gubanaya waa warshad aad u xiiso badan.
Dhinaca kale, waxay u taagan tahay halis, iyo dhinaca kale, waxay ka caawisaa daaweynta cudurro badan. Hase ahaatee, wuxuu heystaa wax wanaagsan, sidaas awgeed waa in la gashado gacmo gashi, alaabta ceeriin iyo bogsiiyo.